Shenzhen Rooder Technology Co., Ltd. Rooder Technology LTD RooderChina Rooder Group - Shenzhen Rooder Teknolojia Co., Ltd
Rooder Technology Limited dia hita ao Shenzhen. Miezaka mafy izahay mba hanangana ny TOP marika ny herinaratra môtô ao Shina. Amin'ny alalan'ny ny taona maro ny fampandrosoana, dia efa fanta-daza ao an-toerana na tany ampitan-dranomasina ary. Ny ekipa matihanina dia ao amin'ny tena manokana ny mampifandanja ny môtô, hoverboards sy skateboards famolavolana, orinasa mpamokatra entana, sy ny asa fanompoana ara-barotra. Nanokana izahay mba hanome ny tsara lavitra fohy-pitaterana fitaovana ho an'ny olombelona amin'ny alalan'ny manaraka ny ara-tsosialy angovo andraikitry ny famonjena, sy ny karbaona ambany fiarovana ny tontolo iainana.
Ny orinasa tsy miankina manana isa ny fananana ara-tsaina sy ny zo fototra teknolojia. Noho ny fampitomboana ny angovo tanjona famonjena, fiarovana ny tontolo iainana, dia nahazo ny taratasy fanamarinana ny taona, FCC, RoHS sy hentitra mifikitra amin'ny rafitra fitantanana ny ISO9001. Amin'ny alalan'ny ireo taona rehetra nitomboana, dia efa nanomboka Rooder vitsivitsy modely vaovao môtô.
Ny môtô / hoverboards / stakeboards no mpivaro-bary tamin'ny manerana izao tontolo izao sy be mpampiasa amin'ny fiara manokana, polisy ny andraikiny, Metro mitondra izany, seranam-piaramanidina sy ny trano rantsan-kazo lehibe, toerana Toerana mahafinaritra sy Golf antokony avy, etc.
Ny orinasa ny fampirisihan'ny orinasa bohoka ny tahotra ny natiora, ary mino isika fa ny fiainana ny siansa miova feno nanorina ny famolavolana sy ny R & D rafitra ivelan'ny trano ny marani-tsaina sy ny fanatanjahan-tena vokatra fiara manokana. Manana ny tena matihanina sy za-draharaha endrika ekipa tany an-tsaha, ary izahay kosa dia manana manakiana mahaleotena patanty teknolojia, nandroso fitaovana fitiliana sy ny orinasa mpamokatra entana fototra izay miantoka ny vokatra tonga lafatra. Ny tsy miankina R & D fahaizany no tena niaiky ny orinasa, ary efa fanta-daza amin'ny maha-tokana ny teknolojia avo-toeram-piasana.
Miasa amin'ny alalan'ny fanaovana ny fomba ho zava-dehibe, mahomby, azo ianteherana, fanoloran-tena, nanizingizina, foana isika hanatsara ny vokatra tsara sy ny asa fanompoana, hanome fahafaham-po ny mpanjifa.
Ny fahitana dia ny hahatonga ny fiainana More aina, hentitra loatra sy Healthy.